Buy Best Design Computer Table (45,000Ks) in ကမာရွတ် on ipivi.com
Best Design Computer Table
ဒီဇိုင်းဆန်းတဲ ကွန်ပျူတာ စားပွဲ
ဒီဇိုင်းလှလှလေးနဲ. ကွန်ပျူတာ စားပွဲလေးကို
Mouse တင်ဖို.နေရာလည်း ပါပါမယ်။
အမြင့် တစ်ပေခွဲမှ နှစ်ပေခွဲအထိ အနိမ့်အမြင့်လုပ်လို.
ကွန်ပျူတာ စားပွဲကို အပေါ်လှန် အောက်လှန် ပြုလုပ်နိုင်မှာ
အခံနှစ်ခု လည်း ပါပါမည်။
ဈေးနှုန်း – 45000 kyats
အမည်: Best Design Computer Table